कोरोना संक्रमणबाट जनकपुरका होटल व्यवसायी कृष्ण गिरीको मृत्यु « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कोरोना संक्रमणबाट जनकपुरका होटल व्यवसायी कृष्ण गिरीको मृत्यु
प्रकाशित मिति : २०७७, २८ श्रावण बुधबार ०९:२७
जनकपुरधाम । जनकपुरधामका होटल व्यवसायी कृष्ण गिरीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । करिब २० दिनदेखि काठमाडौँमा उपचाररत उनको गएरति मृत्यु भएको गिरीका छोरा डा. सन्तोष गिरीले जानकारी दिएका छन् । उनी मुटु रोगका साथै अन्य रोगबाट समेत ग्रसित थिए । गिरीको स्वाब परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
होटल रामाका संचालक समेत रहेका गिरीलाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको थियो । कोरोना संक्रमणबाट धनुषामा अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जनकपुरधाम प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेकै बेला विदेह नगरपालिका वडा नं. ८ का ६० वर्षीय पुरुषको मंगलवार मृत्यु भएको थियो । कोरोना पोजेटिभ भई गत साउन ८ गते देखि नै ओइसोलेसनमा भर्ना भएका अस्पतालले जनाएको छ ।
आइतवार मृत्यु भएका जनकपुरधामको कदमचौक स्थित विनय तारा फाउन्डेशन अस्पतालमा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत एकजना पुरुषको पनि कारोना संक्रमण रहेको थियो । मिथिला विहारी वडा नम्बर ५ ललियाका उनी थिए ।
एकसाता अघि धनुषाका शहीदनगर नगरपालिका डुमरियाका ३८ वर्षीय एक पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । साउन १० गते उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पतामा भर्ना गरिएको थियो । भेन्टिलेटरको अभावमा ती युवकलाई विराटनगरतर्फ रेफर गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।